PCLinuxOS 2012.02 KDE Yakabudiswa | Kubva kuLinux
chivindi | | Kugoverwa
Iyo nyowani skrini yePCLinuxOS ichangobva kuburitswa.
Kune avo vasingazive, PCLinuxOS ndeye distro yakavakirwa pa Mandriva, asi panguva ino iri disto ine inotenderera yekuburitsa hunhu, zvinoreva kuti kana uchinge waiswa hazvina basa kuisa shanduro nyowani sezvo ichigadziriswa nguva dzese.
Chimwe chokwadi ndechekuti, zvinoshamisa, zvinoshandisa Zvakakodzera semaneja wepakeji panzvimbo pekushandisa yako wega package package .rpm.
Tine shanduro mbiri, zvakajairwa uye mini, iyo inogara zvishoma pane diski.
Iyo distro inogona kutorwa kubva pano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Yakabudiswa PCLinuxOS 2012.02 KDE
Ini handinzwisise, kana PC Linux OS yakavakirwa pamandriva, ingashandisa sei apt package maneja uye kana paMandriva iri Urpmi ???
Maneja anogona kuchinjika, izvi zvakafanana neFrugalware, yakavakirwa paSlackware uye inoshandisa Pacman
Iwe unogona zvakare kushandisa APT muFedora.
Ini ndinoda kugoverwa uku, kazhinji handidi KDE, asi neiyi distro zvakasiyana.
Ndingadai ndakaiisa palaptop yangu dai ndakanga ndazviona 1 awa yapfuura ndisati ndaisa Mandriva «Iyo yakanyanya kugoverwa iriko» http://blog.mandriva.com/en/2012/01/30/not-this-time/ Hahaha
Iyo yekutanga kutaura kweiyo link yaitaridza kwandiri kunge fanboy, ndosaka ndakamuudza zvandataura
Zvakanaka, ndakabvisa Mandriva ndikasarudza Chakra. Ini handina kuyedza PCLinuxOS nekuti ini ndinoda x64 migove.
Zvakanaka, ndinodawo Chakra kupfuura Mandriva, Mandriva ikopi yeMac O $ X
Nah, haufanire kupfuudza kana xD. Mandriva iri (kana yaive, maturusi mazhinji asati abviswa, ndiri kutaura nezva 2010.1) chaizvo, zvanyatsoitwa. Munguva yake, aive iye ega akandibatsira nelaptop isingagonekwe, kunyangwe ini ndaishandisa Gnome yenguva idzodzo.
Ngatione pandinoisa girovhosi paChakra!
Zuva randinoshandisa KDE zvakazara ndichariedza 😀
Ngatione, ndinoziva kuti haina chekuita ne ***, asi ini ndoda rubatsiro uye handizive kwandingaende:
Dambudziko rangu ndere rinotevera: pane ese ma distros andakaisa, mune chero rimwe chete ini ndinogona kuwedzera resolution ye800 × 600 kana 1024 × 768, ini ndine Intel HD 2000, yakabatanidzwa, mune Intel Pentium Dual Core G620 processor (Sandy Bridge) pa2,6 Ghz.
Chii chingave chiri dambudziko? MuWindows 7 mushure mekuisa iyo giraidhi mutyairi ini ndakaisa resolution nenzira kwayo, pasina dambudziko.
MuGNU / Linux iyo Intel haishandisi madhiraivha eimba, nekuti ndakave nezvakawanda zvakawanikwa neIntel uye handina kana kumbove nematambudziko….
Kutenda pamberi uye kukwazisa.
Unogona kuenda apa: http://foro.desdelinux.net/
Ndiri kuzoyedza kuti ndione kuti zvinoshanda sei.
Handina kuziva kuti yaiumburuka. Iyo minipoint yePCLinux, yatove inopenya.
Handina kuziva kuti zvimwe either
imwe yemadistros andinofarira uye iyo ine basa rekuchinja kwangu kuKDE.
Ndichiri kurangarira nekufunga pandakashandisa Mandrake 10, mafambiro anoita nguva uye zvinhu zvinoshanduka.
Vanhu vandinokukorokotedzai ngeblog, nguva pfupi yadarika ndauya kuno ndichibva "Googled" akati wandei ndichitsvaga Arch hehe, pandakasiya dhimoni rangu VAIO laptop (sony + ati anoita kunge aronga kudzivirira hupenyu hwepenguin) kune imwe ine Intel mifananidzo I inodzokera kuLinux nyika.
Pindura kuna Johannes
Yakanakisa Linuxero Desktop: Kukadzi 2012